Armenia – Azerbaidjana : Tanora Bilaogera Mamita Iraka Hameno ny Hantsana Jeopolitika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Mey 2018 13:10 GMT
Efa ho 15 taona, rehefa nangatsiatsiaka ny fifandonan'i Armenia sy Azerbaidjana momba ny faritra Haut-Karabagh, taorian'ny fifanarahana fampitsaharana poabasy, mbola tsy azo antoka ny hisian'ny fandriampahalemana maharitra ary vitsy amin'ireo teratanin'ny firenena roa tonta no mba nanana fotoana nihaonana sy nifandraisana. Mety hiova anefa izany, miaraka amin'ny DOTCOM, tetikasa iray vatsian'ny Birao misahana ny raharaham-panabeazana sy kolontsaina ao amin'ny Departemantam-panjakàna Amerikàna, ary tanterahan'ny Tetikasa Mirindra (Harmony).
Vao avy noforonina mihitsy ireo bilaogy ary mbola vitsy ireo lahatsoratra nivoaka, saingy ny Global Voices dia maniry ny tetikasa mba ho tafita ary manantena hamokatra fintina tsy tapaka avy amin'ireny bilaogy ireny, arakaraky ny fisian'ny lahatsoratra vaovao mivoaka. Mandra-piandry an'izay, na mety hisy aza ireo sakana tsy maintsy dinganina, izay mety tsy ho laitra mihitsy ny sasany, Edita, 15 taona, avy any Armenia,manome tsirim-panantenana iray (amin'ny teny anglisy, toy ny rohy rehetra hanaraka ato anaty lahatsoratra).
Ao anaty fanehoankevitra iray amin'ny bilaogin'i Dilara, ankizivavy iray 14 taona monina any Bakou, renivohitr'i Azerbaidjana, ary ankizivavy iray hafa mpandray anjara avy any Armenia, Nare, 15 taona,no maneho hevitra mitovitovy hoe :
Samira, 15 taona, dia manantena koa hahita namana vaovao amin'ny alàlan'ilay tetikasa.
Ato ny tranonkalan'ny DOTCOM : http://dotcom.ph-int.org ary manana pejy iray ao amin'ny Facebook, ato. Ao amin'io rohy io, misy bilaogy iray ihany koa afaka jerena, izay noforonina mba hahafahana manolotra ireo singa samihafa ho any amin'ireo mpandray anjara. Betsaka amin'ny bilaogin-dry zareo no vita lisitra ao anatin'ireo pejy mombamomba ireo talen'ilay fandaharanasa ho an'i Armenia sy Azerbaidjana.